कुन देशका नेपाली कहिले आउँदैछन् ? हेर्नुहोस तालिका « हाम्रो ईकोनोमी
कुन देशका नेपाली कहिले आउँदैछन् ? हेर्नुहोस तालिका
२४ जुनमा नेपाल एयरलाइन्सको मात्र फ्लाइट छ । सो दिन नेपाल एयरलाइन्सले साउदी र कुवेतका नेपालीहरुलाई उद्धार गर्ने छ । २५ जुनमा नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडीले जापानका नेपालीलाई उद्धार गर्दा हिमालय एयरलाइन्सले साइप्रस÷इजरायलबाट उडान गर्ने छ ।